ဖူးနုသဈ: ဥုံဖှ စငျကာပူနဲ့ မရီနာဘေးက အတှေးမြား
Posted by ZT at 10:58 PM
စန်ဆိုဆာ. birdpark. မူစဆာဖာ. zoo.. ဟစ်စထရီလေးကော သိပရစေလား။
စိတ်တွေရွင်နေပုံရတယ်။ အဟစ်နေကောင်းလေား။ စာထဲမှာရွင်တာ ဒီတစ်ခါဘဲသတိပြူမိသေးတယ်။
ward verification ဖြုတ်ပေးပါ. သိတ်နစ်သက်ရင်တော့ထားပါ။
(အာဖရိက တောထဲက သတ်တဝါနှဈကောငျ မိတျလိုကျနတေဲ့ပုံ ဒီဇိုငျးထုတျတယျလို့)
အတော်ဝါသနာကြီးတဲ့ ဗိသုကာပါလား။ ကြုံဖူးပေါင်။
ပုံတွေကောင်းတယ်ပြောမို့ နောက်ဆုံးမှ တွန့် သွားဒယ်
လုပ်တော့မယ်။။။ ကျနော်လည်း ကာစီနိုမသွားဘူး သတ်ချင်သတ် ၁၀၀ ဆိုတာနည်းလား။ ဖိနပ်ပဲဝယ်စီးမယ်။
၁၀၀ အကောက်ကောက်တာ ကျနော်တော့ ထောက်ခံတယ်။ ခုထိ အဲဒီ ၁၀၀ ကြောင့် ဝင်ကို မဝင်ဖူးသေးဘူး၊ နို့မို့ဆို အထဲရောက်နေတာ ကြာလှပေါ့။ ဟားဟား။
အင်း... မသိသေးတာတွေ သိသွားရတယ်...
သူတို့တွေလဲ ဥုံဖွတွေ ဘာတွေ အတော်လုပ်ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်...။
ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ်လို့ ပြောမလို့ကို....းD
ဟုတ်တယ် ဒီတခါတော့ နာသွားဘီဗျာ